Sary hosodoko menaka Ángel Villanueva ao amin'ny 'Mamatonalina any Paris' | Creativos Online
Raha nilaza aho fa nalaiko tamin'ny fakantsariko ity sary ity ary nandalo sivana aho hahazoana io valiny io dia azo antoka fa maro no handalo nefa tsy tsapany fa tena izy io. vita amin'ny menaka am-paosy ataon'ny artista manana teknika tena tsara.
I Ángel Villanueva no mitondra antsika amin'izany alina mahagaga any Paris izany izay andraisan'ny mena ny andraikitra lehibe ary, noho ny lokony, dia sarotra be ny mahita ny fahasamihafana mba hahatsapantsika fa miresaka hoso-doko vita amin'ny antsipiriany lehibe isika.
Asehon'i Villanueva amintsika izany, miaraka amina a teknika lehibe sy faharetana ampy, azonao atao ny maka sary an-tsary avo lenta toy ilay miakatra eo afovoan'ny sary lohateny. Hoso-doko menaka hitantsika rehefa mijanona amin'ny antsipirian'ny lehilahy hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny sary, na ireo hazo izay misy antsipiriany sasany izay tsy tonga amin'ny zava-misy marina tahaka ny fahita eo afovoan'ny asa.
Izany dia amin'ireo fisaintsainana ireo sy ny fampiasana jiro teo amin'ny tetezana izay nifantohizanay voalohany mba ho talanjona amin'ny fialamboly tsy mampino nataon'ny tanan'ity mpanao hosodoko ity. Avy eo dia nandalo talohan'ny atmosfera nangonina isika izay nitondra antsika mivantana tamin'io alina majika tany Paris io izay misy ny romantisma mandany ny toerana sy ny fotoana amin'ny alàlany.
Mpandoko iray izay manohy mijery ny tanjony manokana ary avy amin'ny tranokalany dia afaka mahita ny ampahany amin'ny asany sisa ianao. Kitiho ireo teknika sy rantsan'ny kanto samihafa toa ny sary, famolavolana na fanoratana hahitana a mpanakanto tena mahay zavatra maro mitady karazana fitenenana isan-karazany hanehoana ny kantony.
Miaraka amin'i Jeremy Mann izahay hitady karazana menaka hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Mamatonalina any Paris' ao anaty menaka avy amin'i Ángel Villanueva